कृषि वस्तुको वैदेशिक व्यापार : १ खर्ब ७३ अर्बको भित्रिँदा ३७ अर्बको मात्र निकासी ! - Arthakoartha.com
काठमाडौं, १९ फागुन । आयातमा निर्भर नेपालको समग्र वैदेशिक व्यापारमा वर्षेनि व्यापार घाटा बढ्दै जानु नौलो कुरा रहेन । निर्यातको तुलनामा दशौं गुणा बढी आयात भएपछि व्यापार घाटा चुलिँदै गएको सरकारी तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । तर कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिवस्तुकै आयात डरलाग्दो परिमाणमा हुनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना अर्थात् माघसम्ममा मुलुकमा रू. १ खर्ब ७३ अर्ब बराबरको कृषि वस्तु आयात भएको छ । तर कृषि वस्तुको निकासी भने करीब रू. ३७ अर्ब बराबरको मात्रै छ । उक्त तथ्यांकले यस्ता वस्तुको आयात निर्यातको तुलनामा ४.६८ गुणाभन्दा बढी रहेको देखाएको छ ।
विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा.४९ अर्बको अन्न, २२ अर्ब ४० करोडको तरकारी र १० अर्ब १५ करोड रपैयाँ बराबरको फलफूल तथा काजु÷बदाम भित्रिएको छ । सो अवधिमा आयातित अन्नमध्ये धानचामल मात्रै.३० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा ६१ प्रतिशत बढी हो । गत आवको ७ महिनामा १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको धान–चामल भित्रिएको थियो ।
बजेटको आकार घटाउँने हैन खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्योः पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री (भिडियो)
दशैं लक्षित सस्तो मेला असोज देखि भृकुटीमण्डपमा हुने
आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन बाँकी हुँदा राजस्व संकलन ८८.५७ र विकास खर्च ५५.८३ प्रतिशत मात्र